एक वर्ष शैक्षिक संस्था नचल्दैमा आकाश खस्दैन - Himal Dainik
काठमाडौँ २ आश्विन २०७७, शुक्रबार १६:५९
माननीय गगन थापाले एउटा अनुभवी प्रशासकले झैँ शिक्षा सम्बन्धि कुरा गर्नुभयो, स्वास्थ्यलाई बुझाउनुभयो। म यसबारे विस्तारमा जान्नँ।
अहिले देखिएको संकटलाई कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्नबाट म कुरा सुरू गर्न चाहन्छु। अहिले हामी मुलुकमा रहेका संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमध्ये पनि सबैभन्दा बढी संख्यामा रहेको स्थानीय सरकारलाई नै बढी सशक्तिकरण गर्नुपर्छ र त्यसैलाई अहिलेको समस्या समाधानमा बढी जिम्मेवारी र नेतृत्व दिनुपर्छ भनिरहेका छौ।
सजिलो र सर्वमान्य प्रस्तुतिका लागि म आज तपाईँहरूसामू केही कुरा राख्छु। मैले अंग्रेजीमा पढे अनुसार, क्रिएटिभ लिडरसिप (श्रृजनात्मक नेतृत्व) र डोमिनेन्ट लिडरसिप (प्राधिकारवादी नेतृत्व)। गरि नेतृत्वलाई मूलतः दुई भागमा बाँढ्न सकिन्छ।
अब अहिले देशको कार्यकारी नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। उहाँ सत्तारुढ नेकपाको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। शिक्षा मन्त्रीमा गिरिराजमणी पोखरेल हुनुहुन्छ। उहाँहरुका बारेमा व्यक्तिगत रुपमा मलाई केही भन्नु छैन, दुबै असल मानिस हुनुहुन्छ।
तर, यत्रो ठूलो चुनौति आएको बेला श्री ३ राणा सरकारले उर्दी लगाए जस्तै उर्दी जारी गर्न वा हुकुम चलाउन पनि सकिन्छ। यसलाई भनिन्छ, प्राधिकारवादी वा डोमिनेन्ट लिडरसिप।
प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा मान्नैपर्‍यो, किनकि, कानुनले नै भनेको छ कि उसले भनेको मान्नुपर्छ। शिक्षा मन्त्रीले भनेको पनि मान्नै पर्‍यो। उसित अधिकार छ। अधिकार मात्र होइन, प्राधिकार पनि छ।
अर्को हुन्छ, चुनौती। आएको बेलामा अहो! यत्रो चुनौती आयो, यो चुनौती कसरी पार लगाउन सकिएला त भनि सरकार भन्दा बाहिर रहेका र सरकारले साधारण टेर पुच्छर नलगाइरहेका मानिसले पनि बेला बेलामा चुनौतीको सामना गर्न उत्तर दिएको इतिहास छ।
अक्सर के देखिएको छ भने, सरकार बाहिरका मानिसहरूः बुद्धिजिवी, महर्षी, सहासिक अभियन्ताले यस्ता कुरा गरेका छन्। निकट भविश्यमा सम्भावना रहेको एउटा कुरा छ, यद्यपि यो विषय कीन्सको अर्थशास्त्रको हो। अमेरिकामा सन् १९२९ मा भयानक मन्दी (ग्रेट डिप्रेसन) आएको थियो, जसलाई महामन्दी पनि भनिन्छ। अमेरिकी समाज आजको कोरोनाभन्दा पनि भयावह किसिमले समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको थियो।
राष्ट्रपति रूजवेल्ट थिए। अरूको कुरा सुन्नु उनको विशेषता थियो। सामान्यतयः राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीमा अरूको कुरा सुन्ने बानी हुँदैन। उनीहरु कि त सर्वमान्य हुन्छन् कि सर्वजान्ने हुन्छन्।
नेताको दुइटा परिभाषा हुन्छ। सर्वमान्ने र सर्वजान्ने। सौभाग्यवस् राष्ट्रपति रूजवेल्टले आफूलाई सर्वजान्ने पनि सम्झिएनन् र मुलुकले उनलाई सर्वमान्ने पनि सम्झिएन।
एक चलनचल्तीका अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड कीन्सले तिनताका नै एउटा किताब लेखेका थिएः ‘जनरल थिअरी अफ इम्प्लोएमेन्ट, इन्टरेष्ट एण्ड मनी।’ त्यसमा उनले राज्यले हस्तक्षेप नगरी हुँदैन। रोजगार, मिल्टन फ्रिडम्यान, पियु वा मार्सलले प्रचलित गराएको लाससेज फेरले चल्दैन। राज्यलाई हस्तक्षेप गर्न नदेउ भन्ने जो अहिले पनि लगभग यहीँ थियो। त्यस्तै नेतृत्वलाई श्रृजनात्मक नेतृत्व भनिन्छ।
आज के गर्ने? अब प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उपकुलपति वा आयोगले भनेको आधारमा हामी हिँड्यौं भने बाटो छैन। उहाँहरूले बाटो देखाउन सक्नुहुन्न। किन भने उहाँहरू आफैंलाई बाटो थाहा छैन। बाटै थाहा नपाएका मानिसलाई बाटो देखाउन सक्नुहुन्न। त्यस्ता व्यक्तिले कसैलाई बाटो देखाउन सकेनन् अथवा खाल्डोमा धकेलिदिए भने उक्त व्यक्तिको मात्रै गल्ती हुन्छ? उहाँहरूको सबै ताल, तमासा देखिसकियो। उहाँहरूले गरेको सबै हर्कत र चिन्ता देखिसकियो।
केही समय अघि गाईजात्रामा एक कलाकारले बडो सुन्दर कलामार्फत हवाइजहाज हाँक्न दुई पाइलटबीच भएको तँछाड मछाडमा प्रचण्ड र ओलीको द्वन्द्व प्रस्तुत गरेका थिए। त्यो व्यंग्य, प्रहर्शन गाई जात्राको परिघटना थियो। जुन बडो ठिक थियो।
अहिलेको नेतृत्वसँग बाटो छैन। त्यसैले उहाँहरू धेरै दुःखी हुने पनि कुरा छैन। दुःखी त हुनै हुँदैन किनभने उहाँहरूको इरादालाई मैले कुनै शंका गरेको छैन र गर्दा पनि गर्दिनँ। उहाँहरूको बुद्धिमता र योग्यतालाई मात्रै शंका गरेको हो। योग्यता पनि नभनौं। किन भने योग्यता पनि धेरै किसिमको हुन्छ।
कुरो के हो भने, चुनौती नै यस्तो विकराल, अभूतपूर्व र विराट छ। यो चुनौतीको पृष्टभूमिमा प्रधानमन्त्री ओली, शिक्षा मन्त्री पोखरेल वा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले होइन हामी त किम्कर्तव्य विमूढ छौँ भन्नुहुन्छ भने त्यो विल्कुलै क्षम्य छ। त्यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ र हामी अघि सरेर प्रधानमन्त्री वा कुनै मन्त्री एक्लैले गर्ने काम होइन, हामी सबैले मिलेर गर्ने काम हो भन्नुपर्छ।
तर, प्रारम्भदेखि नै गल्ती भयो। कोरोना संक्रमण फैलियो, मानिसलाई ज्यान बचाएर हिँड्नुपर्‍यो। ती आम मानिसमा तिमीहरूको ज्यान बचाउने जिम्मा तिमीहरूकै हो भन्नुको सट्टा ज्यान बचाउने जिम्मा कसलाई दिइयो? डिएसपी, हवलदार, सिपाहीलाई।
उनीहरूले त्यस्तै पर्दाखेरि लाठी चार्ज, बन्दुक, गोली चलाएर सम्बन्धित व्यक्तिले ज्यान नबचाए बरू ज्यानै लिने तर, उसले ज्यान बचाउनैपर्ने भन्ने खालको अभ्यास गरियो। जुन हामीले अनेकौं समाचारपत्रमा देखिसकेका छौँ।
पहिलो जुन राज्य, सरकार र जनताको सम्बन्ध छ, त्यसमा सरकार बचाउने जनताको कर्तव्य हुनसक्छ। राज्य बचाउने जनताको कर्तव्य हुनसक्छ। राष्ट्र बचाउने नागरिकको कर्तव्य हुनसक्छ। नेपाली हामी सारा मधेसी, जनजाति, तराई पहाडी, हिमाली मिलेर राष्ट्र बचाउन सक्छौं र बचाउँला। चाहे त्यो नक्साको प्रसंगमा होस् वा भारतसँग लडाइ नै गरेर भए पनि राम जनम्भूमि हाम्रै हो भनि सिद्ध पनि गर्न सकौँला। तर, हामी त एक हुनुपर्‍यो नि। हामीले हाम्रो अधिकार त बुझ्नु पर्‍यो नि।
त्यसैले आज सबैभन्दा पहिले कोरोनाको संकटमा चाहिएको श्रृजनात्मक प्रतिउत्तरका बारेमा सचेत हुनुपर्छ। यो माननीय गगन थापादेखि लिएर शत्रुघनप्रसाद गुप्ता वा अरू कुनै व्यक्तिसम्मले एक भएर उभिनुपर्छ। त्यो के हो त?
यसको उत्तर मसँग छैन। उत्तरको दावा गर्ने मानिसहरू सबै असफल भइसकेका छन्। अर्को पक्ष के छ भने, यसको उत्तर कसैसँग पनि छैन। यसलाई हामी सबै मिल्यौं भने उत्तर आउँन सक्छ, सबै उत्तर आउनसक्छ। यहीँ लोकतान्त्रिक पद्धतिको सुन्दरता पनि हो।
अहिले गगन थापादेखि कतिपय व्यक्तिले बोलेका कुरा सुन्दासुन्दै एउटा कुरा लाग्यो। श्रृजनाशील युवा नेता गगन थापाको कुरालाई म सूत्रका रुपमा अगाडि राख्छु।
गगन थापाले चार/पाँच चोटि भन्नुभयो, सके कक्षामा पढाउँ, कक्षामा पढाउन नसक्दा सिक्ने परिपाटी त बन्द गर्नु भएन नि। यहाँ सर्टिफिकेट र डिग्री लिने पढाई छ, त्यो डिग्री किन लिने? खोज्नुहोस्।
अहिले यो कोरोनाका कारण चाहे शिक्षा होस् वा स्वास्थ्यको प्रश्न छ, गगन थापाले शिक्षा र स्वास्थ्य दुबैको स्पर्स गर्नुभएको छ। यस प्रश्नका दुई पहलु छन्। एउटा सैद्धान्तिक पहलु, अर्को व्यवहारिक पहलु।
व्यवहारिक पहलुमा क्लास आफूले पनि नलिने, लिए कहिलेदेखि लिने? आगामी सत्रदेखि सुरू गर्ने कि, वा बिचमै टालटुले पाराले गर्ने भन्ने एउटा सूत्र छ। त्यता नजाऊँ।
अर्को सैद्धान्तिक पक्षको पहिलो पक्ष के हो भने, शत्रुघन गुप्ता र गगन थापाले भनेकै कुरालाई दोहोर्‍याउँदै म भन्छु, उहाँहरुलाई आफूले बोलेको बुँदा पनि याद होला। उहाँहरूले राख्नुभएको एउटा प्रस्तावले एउटा प्रश्न खडा गर्छ।
प्रश्न जहिले पनि राम्रो हुन्छ। किनभने उत्तर एकनाशका हुँदैनन्। प्रश्नले नै आधा उत्तर दिइसक्छ।
के औपचारिक शिक्षामा दश, १२ को डिग्री, ओभरसियर, इन्जिनियरको डिग्री, वा प्रोफेसरको डिग्री मात्रै शिक्षा हो त? वा शिक्षा भनेको अरू कुरा पनि केही हो?
शिक्षा भनेको ठाकठुक, हाट्टहुट्ट गरेर विईको डिग्री लिन जरूरी हो कि, त्यो मानिस सिलवान, परिश्रमी, विनम्र र जिम्मेवार हुनु पनि हो? अवश्य पनि यो मानिसका लागि पहिलो शिक्षा हो। यसको पहिलो थलो कहाँ हो? कि त भन्नुपर्‍यो होइन भने, हामी त औपचारिक शिक्षाको मात्रै कुरा गर्दैछौँ। हाम्रा केटाकेटीलाई चाँडै पाँच वा १०/१२ वा विए, एमए पास गराउनुपर्‍यो। र कारिन्दा बनाइहाल्नुपर्‍यो। र पहिले भन्ने गरेजस्तैः राजाको सिन्दुर चढाइहाल्नुपर्‍यो। होइन भने हाम्रा नागरिक र हाम्रो छोरा/छोरी र नातिनातिनालाई मनुष्य बनाउने हो भन पहिले शिक्षाको अर्थ बुझाउनुपर्छ। अर्थात त्यो विद्यार्थी सिलवान, जिम्मेवार, परिश्रमी, धैर्यशाली हुनुपर्छ।
मानिसमा बाँच्नका लागि कम्तिमा चार वटा गुण चाहिन्छ। कुनै कुरामा आत्तिनु हुँदैन। र बच्चालाई हुर्काउँदाको कुरामा गर्भमा बच्चा हुँदा आमाको धैर्य, त्यो जन्मिएपछि उसले टुकुटुकु नहिँड्नेबेलासम्म उ लड्दै, उठ्दै गरेको धैर्य। प्रेमको पहिलो लक्षण धैर्य हो।
कसैले पनि आज प्रेम बस्यो, भोलि नै हात पकड्न जाँदैन। त्यो धैर्य शिक्षाको अनिवार्य अंग हो। अर्को हो, जिम्मेवारीको बोध। कहीँ तपाइले अप्ठ्यारो देख्नुभयो भने अथवा सडकमा कोही व्यक्ति लडेको देखेपछि उसलाई उठाएर अस्पताल पुर्‍याउँदा कोरोना भएछ भने उसलाई तिरस्कार गर्ने होइन। व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई सुरक्षित राख्दै उसलाई कसरी बचाउँने भन्ने हो।
एयरपोर्ट वा हवाइजहाजमा दुर्घटना हुनलाग्यो भने वा अक्सिजनको मात्रा घट्यो भने, पहिले आफू अक्सिजन मास्क लगाएर अनि अरूलाई मद्दत गर्नुहोला भने जस्तै कोरोना संक्रमितलाई मद्दत गर्ने हो। एउटा स्वास्थ समाजको पहिलो लक्षण हो, जिम्मेवार नागिरक। जनता जिम्मेवार हुनुपर्छ।
तर, त्यसमा प्रथम दिनदेखि नै हामीकहाँ गल्ती भएको छ। यसै पनि हाम्रो पुलिस, फूलीका आधारमा चढेका आईजी भन्दा एआइजी, एआइजी भन्दा डिआईजी सानो, एवम् रितले सबैभन्दा सानो तलको पुलिस। पुलिस भन्दा पनि सानो जनता।
सिपाही वा हवलदारलाई इन्स्पेक्टरले डङडङ कुट्न पाएजस्तै पुलिसले जनता कुट्न पाउँछ। यो प्रक्रियालाई सरकार, प्रधानमन्त्री वा गृह मन्त्रीले प्रहिलो दिनदेखि नै पुलिसलाई छोडिदिए। राजाको राँगो फुक्यो भनेजस्तै राजाको प्रहरी फुक्यो भन्ने सोचाइले गल्ती भएको छ।
पहिलो कुरा जनतालाई जिम्मेवार बनाउनुहोस्। तिमीहरूको जीवन हो, तिमीहरूकै छोराछोरीको जीवन हो, तिमीहरूकै छरछिमेकको जीवन हो। छरछिमेक भनेको तिमी आफै हौं। छरछिमेकमा सर्दा तिमीलाई पनि सर्छ भनेर जिम्मेवार बनाउनुपर्‍यो। त्यहाँ गल्ती भएको छ। तर, यसलाई अहिले दोहोर्‍याउन चाहन्नँ।
शिक्षाको वास्तविकता के हो भन्दा हामीमा रहेको विचारका आधारमा शिक्षालाई दुई खालको हुन्छ भन्ने बुझिन्छ। एउटा अनौपचारिक अर्को औपचारिक।
अर्थात, एउटा स्कूल, कलेजको डिग्रीवीना पनि प्राप्त गर्न सकिने शिक्षा। सिलको, शान्तिको, धैर्यको शिक्षा जुन वर्तमान शिक्षा प्रणालीका महान प्रणेता बेलायतका लर्ड मेक्यालेले इंग्ल्याण्डमा कर्मचारीतन्त्र, वृत्ततन्त्र खडा गर्ने सिलसिलामा हामीलाई विस्मरण गराएको अथवा विर्सन लगाएको शिक्षा प्रणाली। अर्को आजको औपचारिक शिक्षा। जसलाई हामी स्कूल, कलेजको शिक्षा भन्छौँ।
अझै पनि केही बिग्रिएको छैन। शिक्षामा सोच्नुहुन्छ भने, कोरोनाको कारण अहिले जसलाई चिन्तित बनाएको छ, त्यो जागिरका लागि हो। त्यो जागिरका लागि पनि के चिन्तित हुने?
मुश्किलले नाम लेख्नसक्ने ३०/४० लाख मानिस विदेश गएर उनीहरूको कमाइको भरमा हामी खाइरहेका छौं। अनि केको चिन्ता मध्यम वा उच्च वर्गलाई? सबै त नपढेकै व्यक्तिको कमाई खाइरहेका छौं। पढेलेखेको हामी अलिकति जो छौं आफू सदनमा फाइफूई गरी महिनाको लाख, लाख कमाउँछौं होला। मन्त्रीलाई त यसको मतलबै छैन।
यसैले पहिले यो दुई प्रकारको शिक्षा प्रणालीको अन्त्य गरौं र जनतालाई आश्वस्त दिलाउ कि कोरोनाविरुद्ध लड्नुछ। यसविरुद्ध लड्नका लागि अनौपचारिक शिक्षा जुन आमा, बाबु अथवा हजुरआमाले सिकाएको शिक्षा छ, त्यसबाट औपचारिक शिक्षा चलिरहेको छ चिन्ता नगरौं भनौं।
यो संयोग होला, बीसौं शताब्दीमा एसियाले दुई नेता पैदा गर्‍यो। जसको परस्पर विपरित विचारधारा थिए। एउटा चीनका माओत्सेतुङ अर्को भारतका मोहनदास करमचन्द गान्धी। महात्मा नभनौं। यो शब्दमा पनि बडो विडम्बना छ।
तपाईहरू एउटा कुरा पत्याउनुहुन्छ? क्रान्तिकारी कार्यक्रम वितरणको शिलसिलामा गान्धीको पहिलो प्रस्ताव थियो, ‘शिक्षाका सबै औपचारिक संस्थालाई दुई वर्षका लागि पहिले बन्द गरिदिउँ। यो शडेको शिक्षा, नोकरी मानसिकताको शिक्षा, दासवृत्ति बनाउने शिक्षा, अंग्रेजको पिठ्यू बनाउने शिक्षा, सरकारको पिठ्यू बनाउने शिक्षा, नेताको पिठ्यू बनाउने शिक्षाको केही काम छैन।’
अनि उनले सम्झौताको रूपमा भने, ‘ल ठिक छ, विद्यालय बन्द गर्न सकिँदैन भने कमसेकम ठूल्ठूला विश्वविद्यालय र कलेज त बन्द गरिदिउँ,’ उनले भने, ‘तीन चिज पढाउँ। ती तीन चिजलाई उनले आफ्नै शब्दमा भन्थे, ‘थ्रि आर’। केटाकेटीलाई लेख्न सिकाउँ (राइटिङ), पढ्न (रिडिङ) र साधारण हरहिसाब गर्न अर्थमेटिक सिकाउँ।
बाख्रा वा गाई चराउन जाने गोठालोले पनि बाख्रा र गाई गन्न जान्नुपर्छ। यसरी उनले आगामी दुई, चार वर्ष थ्री आर पढाए पुग्छ भने। त्यति भएपछि उनीहरु अरब मुलुकमा गएर दुःख गरेर हामीलाई पैसा पठाइ हाल्छन् नि। यो भन्दा बढी के चाहियो र? हाम्रो नेतृत्व वर्गले पनि यहीँ कुरा सोचे हुन्छ।
यो त गान्धीले भने। तर, उनको कुरा कसले मान्ने? उनैका परम् शिष्य जवाहरलालले मानेनन्, पटेलले मानेनन् भने अंग्रेजले किन मान्थे? तर, त्यो काम घुमाएर माओले गरेर देखाइदिए। माओले चीनमा सांस्कृतिक क्रान्तिका नाउँमा ६६ देखि ७६ सम्म स्कुल कलेज सारा बन्द गराइदिए।
उनको प्रसिद्ध शब्दमा आब्हान थियो, बमबार्ड हेडक्वाटर्स विश्वविद्यालय नष्ट गराइदियो। अहिले संसारमा माओविरोधी वातावरण छ। आखिरी माओवादी नेपालमा अध्यक्ष प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराई थिए। दुबै आफैं तर्सिएर अहिले माओवाद छोडिदिए। उनीहरूले अहिले नामै लिन्नन् र छोड्यौं भन्छन्।
चीनले त माओको नामै लिन्न, मुद्रामा र नोटमासम्म छापेको छ। अहिले चीन त माओले बताएको बाटोको विपरित गएको छ। अब म जस्ता मानिसको एउटा दुर्भाग्य भनौं कि के, म अहिले पनि माओको प्रसंशा गर्छु र उनको हिंसाबाहेक उनले गर्न खोजेको ठिक थियो भन्छु। उनले सही गर्न खोजेका थिए र विश्वमा नयाँ युगको सुरू गर्न खोजेका थिए।
सत्ता संघर्षमा त्यो भड्कियो। उनका कतिपय सिद्धान्त आधारभूत रुपमा गलत थिए भन्ने छ। यो मेरो बहसको कुरा भएन। तर, उनले स्कूल, कलेज बन्द गरिदिएका थिए भन्ने भनाइ हो। जुन बडो राम्रो गरेका थिए भन्ने भनाइ हो। यसबारे अर्को दिन विमर्श गरौँला।
अर्थात औपचारिक शिक्षालाई लिएर त्यत्रो ज्यादा भयभित हुने काम छैन। तर, औपचारिक शिक्षाका विषयमा दुइटा कुरा उठेको छ। एउटा कुरा शत्रुधनजीले भन्नुभयो कि अब जुम अथवा अनलाइनबाटै परीक्षा लिइन्छ। अनि त्यहाँ यत्तिका संख्यामा विद्यार्थी छन् भने त्यो परिक्षा कसरी निश्पक्ष हुन्छ?
हो, त्यो परीक्षा अलिकति प्रयास गर्‍यो भने निश्पक्ष हुन्छ। त्यो शिक्षा प्रणालीको सवाल हो। शिक्षाका सिद्धान्तको सवाल हो। किताब, कपि सबै चिज दिनुहोस् र किताबै हेरेर लेख्न भन्नुहोस् न। हेरेर लेख्ने पनि छन्। एउटा अत्यन्त तेजस्वी विद्यार्थीले चार वटा किताब पढेर लेखेको लेख र एउटा भुस्कटले लेखेको लेख त बुझिन्छ नि।
यसैले जुमबाट गरे पनि पोष्ट अफिस वा कापीबाट गरे पनि वा अन्य कुनै माध्यमबाट गरे पनि जाँच लिन सकिन्छ। त्यो फेयर, अनफेयर केही हुँदैन। म यो कुरा गम्भीरतापूर्वक भन्दैछु, अहिलेको हाम्रो परीक्षा प्रणालीको विशेषता के छ हेर्नुभएको छ?
ध्यानले हेर्नुहोस्, अहिलेको जाँच प्रणालीमा के छ भने, प्रतिभाशाली विद्यार्थीले जाँच दिएपछि विर्सिन्छ। उसले जाँच दिएर प्रथम श्रेणीमा पास गरेपछि पढेको कुरा विर्सिन्छ। अनि भुस्कोर विद्यार्थीले जाँच अघि नै विर्सन्छ भने फरक के छ? १२ कक्षामा पढेको ए प्लस बीको होल स्क्वायर वा कुनै कुराले के हुन्छ? त्यसैले जाँच प्रणालीबाट जति आतंकित शत्रुघन गुप्ता हुनुहुन्छ म त्यति छैन।
यो जाँच प्रणालीको विशेषता के हो भने, भुस्कोरले जाँच अघि र प्रतिभाशालीले जाँचपछि विर्सिन्छ। दुई चार वटा रटेका फर्मूलाबाहेक अरू त कुनै कुरा सिकेकै हुँदैन। न उसले सिल, न शक्ति, न सद्चरित्रता सिक्छ, न धैर्य सिक्छ, न शान्ति सिक्छ न महत्वाकांक्षामाथि नियन्त्रण गर्न सिक्छ। यसमा मलाई चिन्ता छैन।
गगन थापाको एउटा प्रश्न ठिक छ। उहाँले भन्नुभयो, ‘यो भरे भोलिको नाटक नगरौँ र निर्णय गरौँ कि, यो सत्र यसपटकलाई बिग्रियो र चलेन। हामीकहाँ मात्र होइन, अमेरिकामा पनि चलेको छैन। यसैले हामीले पनि यो सत्र नचलाउँ।’ तर, सत्र नचलेपछि विद्यार्थीले के गर्ने? उनीहरूलाई के काम दिने भन्ने प्रश्न छ। यो समस्या माओलाई पनि परेको थियो।
त्यसैले यो प्रश्न जरूरी छ, पहिले हामीहरू एउटा युनानिमिटीमा पुगौं। सरकार नपुगे पनि हामी पुगौं। अब अहिले पाँच/छ महिना बिग्रीइसक्यो। बाँकी पाँच/छ महिनाको पनि केही मतलब छैन।
एक वर्ष तथाकथित डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट नभएर यो मुलुक वा समाजलाई केही बिग्रीँदैन। तर, यो बिचको ६, ७ महिनामा के पढाउने, कसरी पढाउने, पुरानो पद्दतीको शिक्षाको वास्तविक अर्थ के हो? त्यसका बारेमा कुरा गरौँ।
अहिले बडो अवसर छ। प्रत्येक संकट आफैंमा एउटा अवसर हो र नेतृत्व भनेको पदमा पुग्दैमा मात्र हुने होइन। मन्त्री बन्दैमा अगाडि सेना, पछाडि सेना, माथि हेलिकप्टर, तल पानीजहाज चलाउने वित्तिकै नेता बनिने होइन। नेता बन्नका लागि तपाईँसँग समाजलाई अगाडि बढाउने केही मौलिक विचार हुनुपर्छ।
समाजमा संकट आइराख्छ। कहिले भोकमरी आउँछ। कहिले डिप्रेसन आउँछ, कहिले इन्फ्लेशन आउँछ, कहिले मुद्रा संकुचन आउँछ। कहिले कोरोना आउँछ, महामारी आउँछ, कहिले बाढी आउँछ। बाढीलाई कसरी मुकाबला गर्ने भन्नेबारे एउटै सवाल छैन नि त। बाढीको उत्तर यो पनि छ कि मनपरी बाँध बनाउनु हुँदैन। भुकम्पको उत्तर यो पनि छ कि मनपरी घर बनाउन र शहरी बसोबास गर्नु हुँदैन। उत्तर छ नि जति पनि।
भनेपछि हामी कोरोनाको नियतीलाई स्वीकार गरौं र भनौं, यसै पनि सबै लक्षण हेर्दा कोरोना आगामी एक/वर्षमा सकिएला जस्तो छैन। कम्तिमा पनि नेपालमा त झनै जाँदैन यसमा ढुक्क हुनुहोस् र यसलाई मेरो अप्रिय भविश्यवाणीका रुपमा लिनुहोस्। किन भने, हामीले विगतमा धेरै मूल्यवान महिनाहरु त्यसै खेर फालेका छौँ।
नेकपाले आपसी झगडामा ‘तँ ठूलो कि, म ठूलो’ भन्नेमा समय खेर फालेको छ। यसबाहेक भ्रष्टाचारमा समय खेर फालेको छ र प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका बुझेकै छैन। यो कसले पढाउने थाहा छैन, मलाई।
यो अवस्थामा हामी ढुक्क रहौँ कि यो वर्षको शैक्षिक सत्र चलाउँदैनौँ। आउने सत्र चलाउँदा हामीले शिक्षाको उद्देश्य के बताउने? औपचारिक शिक्षा कति हुन्छ? अनौपचारिक शिक्षा कति हुन्छ? र अनौपचारिक शिक्षा हुँदा त्यसको प्राविधिक तयारी के गर्न सकिन्छ?
अब मैले माथि भनिसके कि, शिक्षा भनेको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्ष हो। सैद्धान्तिक कुरामा मैले शिक्षा सम्बन्धि सामान्य सूत्र बताएँ। अझ विस्तारमा जाँदा शिक्षाले मानिसलाई संयम् कति सिकाउने? संघर्ष कति सिकाउने? न्यायका निमित्त लड्न सिकाउनु शिक्षाको अंग हो कि होइन? अथवा शिक्षा भनेको समानताका लागि लड्ने अंग हो कि होइन? अथवा समाजमा जे जस्तो छ यसमा यहाँ भन्दा राम्रो हुनै सक्दैन।
वर्तमान प्रधानमन्त्री भन्दा गतिलो प्रधानमन्त्री हुनै सक्दैन भने शिक्षाले त्यहीँ सिकाओस्। पञ्चायतमा महेन्द्रको पालामा महेन्द्रमाला पढ्नुपर्थ्यो जसमा हाम्रा राजा असल, हाम्रै राजा महान भनि।
त्यसैले आउनुहोस् आगामी दिनमा शिक्षा के हो भन्नेबारे चर्चा गरौं र त्यसको व्यवहारिक हकका सिलसिलामा जुम, रेडियो, टेलिफोन जति प्रयोग होला त्यो छँदैछ। त्यति प्रयोग भएर मात्र हुँदैन। ठण्डा दिमागले श्रृजनात्मक नेतृत्वमा अगाडि जाउँ र शिक्षा र स्वास्थ्यका बारेमा गम्भीर श्रृजनात्मक बहस गरौं।
(हालै कोरोना महामारीका मारमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रबारे भर्चुअल मिटिङमा व्यक्त विचारको सम्पादित अंशः)
अघिल्लोकोविड-१९: आज २०२० मा
पछिल्लोचौधरी गु्रपद्वारा अमेरिकन ब्ल्याक डेकरका सामाग्री नेपाली बजारमा विक्रि वितरण सुरु